Ganacsatada Koonfurta Soomaaliya oo Xidhay Meheradahooda iyo Ciidanka laanta Socdaalka oo ka Hadlay | Dhaymoole News
Ceerigaabo (Dhaymoole) Taliyaha laanta Socdaalka ee gobolka Sanaag, gaashaanle dhexe Siciid Cige Maxamed, ayaa sheegay in aan laga laabanayn amarka xukuumaddu ku bixisay in magaalada Ceerigaabo lagaga saaro ganacsatada u dhalatay Koonfurta Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu intaas ku daray in ciddi ka dhaga’adaygta muddada loo qabtay inay ku baxaan, in guryahooda loogu tagi doono, isla markaana la saari doono.
Dhanka kale waxaa guud ahaanba ay ganacsatada gobollada Bay iyo Bakool albaabada u laabeen meheradahoodi ganacsi ee gudaha Ceerigaabo, xilli muddadii loo qabtay in ay dalka kaga baxaan ay ka hadhay 14 cisho.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalintii shalay xukuumadda Somaliland ay soo saartay amar ah in dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ay muddo kooban kaga baxaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag.
Taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Sanaag, gaashaanle dhexe Siciid Cige Maxamed, isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi.“Imikana waan ku celinaya waala saaraya, cid been u sheegi kartaana ma jirto, waa amar dawladdeed.
Annagu dadkan waxa aanu u aqoonsanahay niman Soomaaliyeed, oo Koonfurta Soomaaliya ka yimid, annagu waxaa aanu nahay Somaliland, wax naga magaca naga dhaxeeyaana ma jiraan, hore anagu waxa aanu u diwaangelinay dadkan, anaga wax naga dhulyaala ma jirto haddii aanu laanta socdaalka nahay, magaci qofka iyo sawirkiisi wakhtiga loo qabtay 21-ka Bishan in ay ku baxaan, maalinta ay wakhtiga rasmiga ah ee loo qabtay ay gaadhana waxaa aanu ugu tagayna guryahooda”